अवैधानिक कामदारलाई अस्थायी ‘वर्कपास’ दिने मलेसिया सरकारको घोषणा – ई-सरोकार न्याय र समताको संवाहक
अवैधानिक कामदारलाई अस्थायी ‘वर्कपास’ दिने मलेसिया सरकारको घोषणा
January 17, 2017 January 17, 2017 सरोकार संवाददाता
इसरोकार संवाददाता ४ माघ, काठमाडौं । मलेसिया सरकारले आफ्ना देशमा कार्यरत गैह्रकानुनी विदेशी कामदारका लागि अस्थायी ‘वर्कपास’ दिने घोषणा गरेको छ ।
मलेसिया सरकारले अब अवैध कामदारलाई अस्थायी वर्कपास लिएर काम गर्न सक्ने गरी नयाँ ब्यवस्थाको घोषणा गरेको हो ।
यसले मलेसियमा अवैधानिक रुपमा रहेका हजारौं नेपाली कामदारलाई पनि राहत मिल्नेछ ।
विभिन्न क्षेत्रमा कामदार अभाव भएको र उद्योगहरुको सञ्चालनमै अवरोध पुगेको गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले अवैधानिकलाई अस्थायी श्रम अनुमति दिन लागेको उपप्रधानमन्त्री डा. अहमद जाहिद हमिदीलाई उद्धृत गर्दै द स्टार अनलाइनले लेखेको छ।
अवैधानिक कामदार अब विना कुनै दण्ड तथा जरिवना त्यहाँ थप केही समय वैधानिक बनेर काम गर्न पाउनेछन् ।
मलेसियाका उपप्रधानमन्त्री डा. हमिदीले अध्यागमन विभागले त्यस्तो वर्क पास जारी गर्ने बताए । लेबी भने वर्कपास लिएकाहरुसँग पनि उठाइनेछ । यसलाई अहिलेकै सामान्य प्रक्रियाबाटै जारी गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘महान्याधिवक्ताको कार्यालयले एउटा वैधानिक मार्ग र प्रक्रिया निर्धारण गरेपछि अस्थायी वर्क पर्मिट दिने काम सुरु हुन्छ,’ मन्त्रिपरिषद्को अवैधानिक वैदेशिक कामदारसम्न्धी कमिटीको बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री हमिदीले भनेका छन् ।
४ वटा क्षेत्रमा कामदार लिने निर्णय
मलेसिया सरकारले तत्काललाई ४ वटा क्षेत्रमा विदेशी कामदार लिन सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
कामदारको अत्यधिक अभाव देखिएका खानी उत्खखन, कृषि, टुरिजम तथा हस्पीटालिटी, कार्गा ह्याण्डिङ क्षेत्रमा मलेसियाले थप विदेशी कामदार लिने भएको हो । यो क्षेत्रमा सन् २०२० सम्मलाई मात्रै कादार लैजान पाइनेछ ।
मलेसियाले लामो समयदेखि विदेशी कामदार लिन बन्द गरेको छ । अवैधानिक कामदारको समस्या भोगिरहेको मलेसियाले नयाँ कामदार लैजाने अनुमति नदिँदा धेरै उद्योगहरु प्रभावित भएका छन् ।
यसैका कारण नेपालीको प्रमुख गन्तब्य रहेको मलेसिया अहिले खाडी मुलुकभन्दा पछि परेको छ ।
परिमार्जन मस्यौदा बनाउन मोर्चा को गृहकार्य
ट्रम्पको विश्व ‘दृस्टी’